म्यानमारको शैनिक कू बिरुद्ध कोरियामा प्रदर्शन ! | सुदुरपश्चिम खबर
(epssathi.com बाट साभार)
केहि दिन अघि म्यानमारमा सेनाले कू गरि सत्ता कब्जा गरेपछि अहिले त्यहाँ आन्दोलन चर्किरहेको छ। त्यसको असर कोरियामा पनि देखिएको छ। कोरियामा काम गरिरहेका म्यानमारका कामदारहरुले ब्यानरसहित शैनिक कू को बिरोध गरेका छन्।
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुँदै? जान्नुहोस्!